Komishanka Maamul Wanaaga Oo Ka Feejigan In Wasiirradda Xilalka Banaynayaa Ay Hantidda Xadaan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Komishanka Maamul Wanaaga Oo Ka Feejigan In Wasiirradda Xilalka Banaynayaa Ay Hantidda Xadaan
Published on November 27, 2017 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Masuuliyiinta hay’adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa Somaliland ayaa shaaciyay in ay si dhaw isha ugu hayaan dhaq dhaqaaqyadda la xidhiidha in ay hanti lunsi ku kacaan wasiirrada xukuumadda Siilaanyo.
Guddoomiyaha hay’adaasi Axmed Jaamac Maxamuud, oo maanta xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in ay hore u diiwaangeliyeen hantidda guud ee wasiir kastaaba gaar u leeyahay, isla markaana maalinta uu xilka wareejinayo ay kula xisaabtamayaan.
Axmed Jaamac Maxamuud, waxa uu tilmaamay in si aanu musuq maasuq u dhicin mudadda kala guurka ah ay diyaariyeen hawl wadeeno ka shaqaynaya arrimaha ilaalinta hantidda qaranka ee hadda gacanta ku hayaan wasiirrada jooga.
Waxaanu yidhi “Mudadda kala wareega xukuumadda, ka hay’ad ahaan anagoo sidana xogtii hore ee hantida ay wasiirradu haysteen oo aanu dhicin wax lunsi hantiyeed ah ama wax musuq maasuqa u dhicin, fariintaas ayaanu wasiirrada la bedeli doono gaadhsiinaynaa. Iyadoo aanu xil wareejin kastaba goob joog ka noqon doonno”.
Geesta kale guddoomiyaha gudiga la dagaalanka musuq maasuqa ayaa xusay in ay diyaariyeen macluumaad lagaga saxeexi doono wasiir kastoo la magacaabo marka uu xilka wareegayo, kaasoo lagu cadeeyay hantidda uu leeyahay si aanu musuq maasuq ugu kicin marka uu xilka qabto.
“Waxaanu diyaarinay foomamkii iyo macluumaadkii wasiirrada cusub ee la magacaabi doono iyo masuuliyiinta kale-ba iyaguna waxay la wareegaan ay ku saxeexi doonaan. Si ay xogta aanu masuuliyiinta dawladda ka hayno u gasho” ayuu yidhi Axmed Jaamac Maxamuud.
Si kastaba ha ahaatee, xiliyadda la gallo kala wareega xukuumadaha ayaa inta badan waxaa dhacda in wasiirrada iyo masuuliyiinta kale ee xukuumadda talladda ka sii degaysaa in ay si aad ah u boobaan hantidda dawladda, iyagoo ka faa’iidaysanaya mudadda kala guurka ah.